‘क्युआर कोड’को प्रयोगले पर्स बोक्ने बानी नै हरायो : गभर्नर अधिकारी ~ Banking Khabar
क्विक रेस्पोन्स कोड अर्थात् ‘क्युआर कोड’को प्रयोग र विस्तार दुई, अढाई महिनामा यो स्थितिमा पुग्ला भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ । आज यो प्रविधि यो स्थितिमा आइपुगेको छ । यो प्रविधिको प्रयोग सजिलो छ । यसले हामीलाई दैनिक व्यवहारमा सजिलो बनाइरहेको छ ।
मैले सिन्धुली मन्दिरमा पुगेर पनि क्युआर कोड चलाएँ । बाटोमा जाँदा कैयौँ होटेल, रेस्टुरेन्टमा क्युआर नै प्रयोग गरेँ । तर, मलाई पशुपतिमा अप्ठ्यारो भयो । त्यहाँ उद्घाटन गर्न जाँदा असहाय, दीन–दुःखीलाई पैसा दिनुपर्ने, क्युआर कोडका कारण पर्स बोक्ने बानी नै हरायो । पर्स नै छैन, पैसा बोक्ने बानी नै छैन, अब कसरी नगद दिने ? सहयोगापेक्षीको पहुँच विद्युतीय भुक्तानी ग्रहणमा छैन, मसित नगद छैन । मलाई प्रविधिले यो अवस्थासम्म पु¥यायो । म आफैँ पुगेको हैन, प्रविधिले पु¥यायो । परिवर्तन यसरी नै आउने हो । यो प्रविधिको विशेषता एकदमै अनौठो छ ।
सबैसँग स्मार्ट फोन नहुन सक्छ तर क्युआर कोडका लागि स्मार्ट फोन चाहिन्छ, यदि भएन भने के गर्ने त ?
यहाँहरुका बालबच्चा हामीभन्दा जान्ने छन् । केटाकेटी अहिले धेरै स्मार्ट छन्, उनीहरुले क्युआर कोड कसरी चलाउने भनेर बताउनेछन् ।
मानौँ, तपाईंसित स्मार्ट फोन छैन, तपाईं पुरानै फोन चलाउनुहुन्छ भने त्यस अवस्थामा पनि केही विकल्प छन् । तपाईंको नजिकै कुनै न कुनै ई–सेवासँग जोडिएको एजेन्ट (विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक) हुन्छ । उनीहरुमार्फत क्युआर कोड स्क्यान हुने व्यवस्था हुन्छ । उनीहरुको सहयोगबाट तपाईंले विद्युतीय भुक्तानी सुविधाको नियमित उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
आम उपभोक्तालाई मेरो अनुरोध छ – क्युआर कोडको प्रयोगलाई दैनिक व्यवहारको अङ्ग बनाउनुहोस् । यसको प्रयोगले पैसा हिनामिना हुँदैन, पैसा तलमाथि हुँदैन । यहाँहरुको बैंकको खाताबाटै क्युआर कोडमा पैसा सर्छ ।
अर्को विषय, सकभर यहाँहरुले तिर्ने वा जम्मा गर्ने वेलामा फिङ्गरहरु हान्न नपरोस्, सिस्टम साधारण होस्, यी ड्युहरु त सिस्टममा छँदैछन् । उदाहरणका लागि अहिले मैले बिग मार्टमा गएर किनमेल गरेँ भने बिल आउँछ । मैले स्क्यान गर्दा फिङ्गर हानिराख्नुपर्दैन । बिलमा जति रकम आउँछ, त्यति नै तिरिन्छ । तर, मैले कुनै तरकारी बजारमा गएर स्क्यान गरेँ भने त्यहाँ मार्केटमा जस्तो बिल हुँदैन । त्यतिवेला मैले फिङ्गर हान्नुपर्ने हुन्छ । मैले फिङ्गर हान्दा फरक पर्न सक्छ । एकजना साथीले पिनकोट हानिदिनुभएछ, तिर्नुपर्ने ६० रुपैयाँ थियो तर बिल एक हजार रुपैयाँको निस्किएछ । उहाँले पछि फिर्ता माग्नुपर्ने अवस्था आयो । केही यस्ता अवस्था पनि हुन्छन् । त्यसैले यसको समाधानका लागि सेवाप्रदायक बैंक आफैँ सतर्क भएर प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । ग्रासरुट लेवलका ग्राहकलाई जसरी सजिलो हुन्छ, जसरी सहज हुन्छ त्यसरी नै प्रयोग गर्न सक्ने बनाइदिने काम बैंकहरुको हो ।
नगदमा हुने कारोबार धेरै खालका विकृतिको जड हो, चाहे भ्रष्टाचार होस्, चाहे अन्य आपराधिक घटना वा काम । यी सबैमा नगद जोडिएका हुन्छन् । ९९ प्रतिशत आपराधिक घटना वा विकृति नगदका कारणले निम्तिएका हुन्छन् । नगदलाई छोडिदिनुभयो भने यी विकृति पनि घट्छन् । नगदरहित कारोबारले नै सुशासित समाजको विकास हुन सक्छ । हामीले संसारका मुलुकहरु हे¥यौँ भने अत्यन्तै सुशासित भनिएका मुलुकमा नगदसहित कारोबार हुने गरेको पाउँछौँ । त्यसैले सभ्य र आधुनिक समाज निर्माणका साथै व्यक्ति स्वयम् आधुनिक, सभ्य र सुशासित हुन पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग जरुरी छ । (गभर्नर अधिकारीद्धारा एक कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यका आधारमा तयार पारीएको सामग्री)